Fanaraha-maso kalitao - Indostrian'ny Piping DEYE
Ny fomba fitsapana an'i Deye hifehezana ny kalitaon'ny valizy
-Casting fanamarinana. Ny ekipa QC dia hanamarina ny fanariana entana isaky ny zavatra avy amin'ny fisehoana, ny hatevin'ny rindrina, ny habeny, ny habeny ary ny tatitra ara-materialy tany am-boalohany araka ny fenitra iraisam-pirenena hialana amin'ireo tsy mendrika.
-Fijerena masinina. Mandritra io vanim-potoana io, ny ekipa QC dia hanamarina ny maha-marina ny milina, ny refy mifanatrika, ny fandavahana ny flange mba hahitana olana mety hitranga raha vao azo atao.
-Fijerena fivoriambe. Aorian'ny fivoriana, ny QC dia hanao fitsapana ankapobeny amin'ny valva. Ny fanamarinana an-tsary dia ahitana ny fahadiovan'ny efitrano anatiny, fisehoana mamirapiratra sy madio ary marika mazava eo amin'ny vatana. Ny fizahana refy dia misy refy mifanatrika, ny refy lehibe ifandraisan'ny fifandraisana. Ny fanandramana fanerena dia ahitana ny fanandramana hydrostatic amin'ny famehezana sy ny fanandramana ny vatana sy ny rivotra amin'ny famehezana.
--Dimension Checking: QC dia hizaha toetra ny fitrandrahana flange arakaraka ny ANSI B 16.5 Na fitakiana mahazatra hafa. Ny refin'ny mifanatrika dia mifanaraka tanteraka amin'ny ANSI B 16.10 na fenitra hafa takiana.
Ny haavon'ny valves sy ny refin'ny kodiarana tanana araky ny sary teknika nifanarahana tamin'ny fifanarahana.
-Hydraulika fitsapana sy fitsapana rivotra. QC dia hizaha toetra ny tombo-kase tombo-kase, seza miverina ary Shell tena mafy tahaka ny API598 na EN1226 na fenitra hafa nifanarahana tamin'ny fifanarahana. Ny lamina dia mahazatra ary ny valin'ny fitsaharana dia voalaza.
-Painting & fonosana. Hodinihina ny loko hosodoko sy ny vokatr'ilay famafazana. QC dia hanao izay hahazoana antoka fa ny famonosana dia isaky ny fifanarahana Fangatahana. Ny valizy madio dia apetraka milamina ao anaty boaty hazo matanjaka misy marika mazava tsara amin'ny alàlan'ny famenoana fitaovana malefaka ampy hisorohana ny fifandonana.
-Ny tatitra. Aorian'ny fitsapana dia hahazo tatitra amin'ny antsipiriany avy amin'ny sombin-tsipika manamarina ny vokatra vita alohan'ny fandefasana ianao. Ny antsipirian'ny fitsapana Hydraulika sy ny fitsapana an'habakabaka miaraka amin'ny sary sy horonan-tsary dia haseho amin'ny mpanjifa alohan'ny fanoratana.
Taona maro niainana fanondranana valizy sy fanatsarana tsy tapaka, ny rafitra fanaraha-maso kalitao DEYE dia hiasa mafy ary ho tonga lafatra.